अभिनेत्री सनी लियोनीलाई पक्राउ नगर्न केरल उच्च अदालतले क्राइम ब्राञ्चलाई आदेश!!! – News Nepali Dainik
अभिनेत्री सनी लियोनीलाई पक्राउ नगर्न केरल उच्च अदालतले क्राइम ब्राञ्चलाई आदेश!!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २८, २०७७ समय: १७:१६:२३
मुम्बई–अभिनेत्री सनी लियोनीलाई पक्राउ नगर्न केरल उच्च अदालतले क्राइम ब्राञ्चलाई आदेश दिएको छ । सनीमाथि एक इभेन्ट मेनेजमेन्ट कम्पनीले २९ लाख रुपैंयाँको आर्थिक हिनामिनाको आरोप लगाउदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले सन् २०१९ को भ्यालेन्टाइन डेमा नृत्य गर्न सनीलाई पारिश्रमिकवापत २९ लाख दिए पनि सनी कार्यक्रममा नआएको भन्दै उजुरी दिएको थियो । उजुरीविरुद्ध सनीले जमानतका लागि निवेदन दिएपछि अदालतले गिरफ्तार नगर्न आदेश दिएको हो ।
जमानतको लागि सनीसँग उनका पति डेनियल तथा अर्का एक व्यक्तिले अदालतलमा निवेदन दिएका थिए । सनीलाई कोच्ची क्राइम ब्राञ्चले फेब्रुअरी ३ मा तिरुअनन्तपुरममा सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । उनीमाथि आइपीसीको धारा ४०६ र ४२० अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
सनीले भने आफू दुईपटक कार्यक्रम हुने स्थानमा गए पनि कार्यक्रम हुन नसकेको दाबी गरेकी छन् । अन्ततः यो कार्यक्रम अंगमालीमा रहेको एडलक्स इन्टरनेशनल कन्भेन्सन सेन्टरमा गरिएको थियो । यद्यपि सनीले भने आफूले अझै १२ लाख रुपैंयाँ पाउन बाँकी रहेको जनाएकी छन् ।
Last Updated on: February 10th, 2021 at 5:16 pm